Ezokwelapha - AOOD Technology Limited
Ukunemba nokwethembeka kungumsebenzi wezinto zokwelashwa namadivayisi. Kuzo zonke lezi zinhlelo, zibeka isidingo esinamandla kumasystems nasezingxenyeni zazo. Indandatho yesiliphu njengengxenye ye-electromechanical eyenza ukudluliswa kwamandla / isignali / idatha kusuka engxenyeni emile iye engxenyeni ejikelezayo, kubalulekile empumelelweni yohlelo lonke lokudlulisa.
I-AOOD ibinomlando omude wokunikeza izixazululo zezindandatho zesicelo sezokwelapha. Ngobuchwepheshe bamuva nje bezobunjiniyela, ukwenziwa kwezinto okuqhubekayo nobuchwepheshe obuyinkimbinkimbi, i-AOOD isebenzise ngempumelelo ukunemba okumangalisayo nokwethenjelwa kwamasongo okuxegisa ukuxazulula ukudluliswa kwamandla / kwedatha / kwesiginali kuma-scanner e-CT, amasistimu e-MRI, i-high-resolution ultrasound, amasistimu we-digital mammography, ama-centrifuge ezokwelapha, elengayo elengayo nezibonakaliso zezibani zokuhlinzwa njalonjalo.
Icala elijwayelekile kakhulu yizinhlelo ezinkulu zezilayidi zesilayidi se-CT. Isithwebuli se-CT sidinga ukudluliswa kwedatha yesithombe kusuka kumalungu ezitholela i-x-ray ajikelezayo aye kukhompyutha yokulungisa imininingwane emile futhi lo msebenzi kufanele wenziwe ngendandatho eshelelayo. Le ndandatho eshelelayo kufanele ibe nobubanzi obukhulu obungaphakathi futhi ingadlulisa inani elikhulu lemininingwane ngaphansi kwejubane eliphezulu lokusebenza. I-AOOD isayizi enkulu yesilayidi indandatho iyodwa nje: ububanzi bangaphakathi bungafika ku-2m, amazinga wokudluliswa kwedatha yesithombe angafika ku-5Gbit / s ngesiteshi se-fiber optic futhi angasebenza ngokuthembekile ngaphansi kwejubane elingu-300rpm.
Imikhiqizo letihlobene: Izindandatho ezinkulu ze-Bore Slip, Ngama-Bore Slip Rings